Nin Talyaani ah oo ka guuraya jasiirad uu ku noolaa Kaligiis in ka badan 30 sannadood ka dib cadaadis uga yimid maamulka. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nin Talyaani ah oo ka guuraya jasiirad uu ku noolaa...
Nin Talyaani ah oo ka guuraya jasiirad uu ku noolaa Kaligiis in ka badan 30 sannadood ka dib cadaadis uga yimid maamulka.
Nin Talyaani ah ayaa ka guuraya jasiirad uu ku noolaa in ka badan 30 sannadood ka dib cadaadis uga yimid maamulka.
Mauro Morandi, oo 81 jir ah wuxuu jasiiradda Budelli oo ka baxsan waqooyiga Sardinia u guuray sannadkii 1989.
Si kastaba ha noqotee, Sanadkii la soo dhaafay, Mr Morandi wuxuu sheegay in milkiilayaasha jasiiradda oo caan ku ah xeebteeda casaanka ah, ay doonayeen inuu meel kale u guuro.
“Waan guuraya anigoo rajeynaya in mustaqbalka jasiiradda Budelli loo ilaalin doono sidii aan u ilaalinayay 32 sannadood,” ayuu ku qoray Facebook Axadii.
Isaga oo lahadlaya BBC Outlook sanadii 2018, macalinkii hore ee barashada jimicsiga wuxuu sheegay in uu “waligiis xoogaa mucaarad ahaa”.
Waxaan aad uga dheregsanaa waxyaabo badan oo ku saabsan bulshadeena: adeegsiga iyo xaalada siyaasadeed ee Talyaaniga, ayuu yiri Mr Morandi. “Waxaan go’aansaday inaan u guuro jasiirad lama degaan ah oo ku taal Polynesia, kana fog ilbaxnimada oo dhan. Waxaan doonayay inaan bilaabo nolol cusub oo aan kaga agdhowaanayo nolosha dabiiciga ah.”
Markii ay safarkooda ka bilaabeen dhinaca badda, isaga iyo dhawr saaxiibadii ah waxay ka degeen jasiiradaha Talyaaniga ee La Maddalena, halkaasoo ay qorsheynayeen inay ka shaqeeyaan oo ay ka helaan lacag ay ku maalgeliyaan inta ka harsan safarkooda.
Hase yeeshee markii uu yimid jasiiaradda Budelli oo uu la kulmay ilaaliyaha jasiiradda oo qarka u saarnaa in uu howlgab noqdo, Morandi waxa uu go’aansaday in uu joogo.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu sannado badan la kulmayay hanjabaado dhowr ah oo la doonayay in jasiiradda looga saarayo..
Sannadkii 2020-kii madaxweynaha Seeraha Qaranka ee La Maddalena, Fabrizio Fonnesu, ayaa CNN u sheegay in Mr Morandi uu aqalkiisa ku yaalla jasiiaradda ku sameeyay isbaddallo sharci-darro.
Codsi dowladda Talyaaniga looga codsanayo inay u oggolaato inuu sii joogo ayaa laga soo ururiyay in ka badan 70,000 oo qof oo saxiixay.
Balse maalintii Axadda, Mr Morandi wuxuu ku dhawaaqay go’aankiisa ah inuu ka guurayo jasiiradda , isagoo u sheegay wargeyska The Guardian inuu u guurayo guri yar oo ku yaal jasiiradda La Maddalena ee u dhow: “Noloshaydu wax badan iskama beddeli doonto, weli badda waan arki doonaa. ”
Previous articleCiidamada Jeneral Saadaq Joon iyo Jeneral Yuusuf Indhacadde oo isku fidiyay Degmooyinka Hodon iyo H/wadaag fariisimo Cusub ka Samaystay Xaafada Siigaale ee degmada Hodan.
Next articleBoqortooyada Ingiriiska oo cunaqabateyn saartay 22 shaqsi oo 14 ka mid ah ay u dhasheen Ruushka, kuna lug lahaa kiisas musuqmaasuq
Madaxweyne Farmaajo oo deyn loo haysto
Faadumo Maxamuud oo kamid ah Mulkiilayaasha Meherada Alla Aamin Furniture oo Muqdisho ku taal ayaa sheegtay inay 4 sanno raadinayso lacagta qalab jiif ah...